फाइभ–जीका लागि अमेरिकामै चिनियाँ प्रविधिको पक्षमा वकालत ! « GDP Nepal
( Sunday, August 25, 2019)
फाइभ–जीका लागि अमेरिकामै चिनियाँ प्रविधिको पक्षमा वकालत !
Published On : 16 May, 2019 6:05 am
अमेरिका (एजेन्सी): फाइभ–जी प्रविधिका लागि विश्वका सबैजसो मुलुक चिनियाँ कम्पनीको भर परिरहेका बेला अमेरिकाले भने चीनको नामै सुन्न चाहेको छैन । अमेरिकाको अनेकौं दबाबबीच पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको साथ लिइरहेका बेला अमेरिकामै पनि चिनियाँ कम्पनीको पक्षमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
अमेरिकाका केही सहरमा निकट भविश्यमै फाइभ–जी आउन लागेको छ । अमेरिकी सिनेटरहरूले चिनियाँ उपकरण निर्माताको सहयोगबिना नयाँ प्रविधि कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
फाइभ–जी प्रविधि अत्यन्त तीव्र वायरलेस कनेक्सनको अर्को पुस्ता हो । सीएनएनको प्यारेन्ट कम्पनी वार्नर मिडियाको स्वामित्व लिएका अमेरिकाका ४ क्यारियरहर भेरिजोन, स्प्रिन्ट, टी–मोबाइल र एटी एन्ड टीले हुवावे र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूबाट चिप्स नकिन्न आग्रह गरेका छन् ।
हुवावे विश्वकै ठूलो दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हो । तर, अमेरिकी सरकारले हुवावेको प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिका–चीनबीचको तनाव उच्च रहँदै आएको छ । अमेरिकी सरकारले हुवावेमाथि सम्भावित आपराधिक गतिविधिको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो पनि चीनसँग व्यापार युद्ध चलिरहेको समयमा ।
सिनेटको न्यायिक समितिको सुनुवाइको समयमा सिनेटर डायनी फिस्टिनले चीनले हुुवावेजस्ता कम्पनीहरूको माध्यमबाट संवेनदशील सूचना दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा आफ्नो रणनीतिक साझेदारहरूलाई हुवावेको कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएका थिए ।
तर अमेरिकाले डाटा सेयर गर्दैै आएका बेलायतलगायत कतिपय अमेरिकी मित्र मुलुकहरूले चिनियाँ उपरकणको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसले अमेरिकी डाटाको सुरक्षाको अभ्यासमा पनि चिन्ता थपेको छ ।
कतिपय युरोपेली अधिकारीले जोखिम स्वीकार गरे पनि आपूmले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनी विमति राख्दै आएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले आफ्नो देशको फाइभ–जी नेटवर्क निर्माणमा हुवावेको सहयोग लिन सक्ने विषयमा सहमति जनाएको डेली टेलिग्राफले अप्रिलमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
साइबर र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र सूचना नीतिका सहायक सेक्रेटरी रोबर्ट स्ट्रेयरले चिनियाँ राष्ट्रिय जासुसी कानुनले नागरिकी संगठनलाई चिनियाँ जासुसी र सुरक्षा सेवासँग समन्वय गर्नका लागि बाध्य पारेको बताएका छन् ।
हुवावेप्रतिको अन्य चासोको विषय भनेको फाइभ–जीको प्रतिस्पर्धामा चीनले अमेरिका र अन्य मुलुकलाई पछि पार्नु रहेको छ । यो प्रविधि स्वचालित कार तथा टेलिमेसिनमा पनि प्रयोग हुने भएकाले अमेरिका यी क्षेत्रमा पनि पछाडि पर्न सक्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल फेरि दैनिक ७ घण्टा बन्द, निगमको जापान उडान प्रभावित हुनसक्ने !
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि भन्दै फेरि दैनिक ७ घण्टा बन्द हुने भएपछि
भ्रमण वर्षको पूर्वार्द्धमा कैलाशले ल्यायो नयाँ हेलिकप्टर, रसुवामा पहिलो उडान
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वार्द्धमा कैलास हेलिकप्टर कम्पनीले नयाँ हेलिकप्टर ल्याएको छ । कैलासले
श्री एयरलाइन्स धमाधम विमान थप्दै, बजारमा भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको त्रास !
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सले अर्को विमान पनि थप गरेको
संघीयताले लगानीकर्तामा संशय, तीनवटा सरकारसँग डिल गर्नुपर्दा उद्योगी हैरान
काठमाडौं । मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भएसँगै आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि